ShweMinThar: ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချဖို့အတွက် ရေက အကူအညီပေးနိုင်မလား
(Can water help you lose weight?)
ရေသောက်ခြင်းက ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချရေး(weight loss)ကို ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်ဆိုတဲ့ သီအိုရီကို လေ့လာချက်များစွာအရ ထောက်ခံနေကြပါတယ်။ အစာကြေစေခြင်းနဲ့ ကြွက်သားတွေရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များ အပါအ၀င် ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချခြင်းကိစ္စတွေမှာ ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းခြင်းက သော့ချက်အနေဖြင့် အကြောင်းရင်းများစွာအရ အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်အဖြစ် လှုပ်ရှားနေတာပါ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဆေးပညာရှင်အ၀န်းအ၀ိုင်းအနေဖြင့်လည်း ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချရေးအတွက် ရေအသုံးပြုဖို့ သောက်သုံးဖို့ဆိုတာ သြဇာလွှမ်းမှုဘယ်လောက်ရှိကြောင်း မသေမချာရှိဆဲပါ။
သည်ဆောင်းပါးမှာတော့ လူတစ်ယောက်အနေဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချရာမှာ ရေသောက်ခြင်းက အကူအညီဖြစ်နိုင်စရာရှိကြောင်း လေ့လာစရာ အကြောင်းပြဆိုချက် ခြောက်ချက်ပါပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည်လည်း လူတစ်ယောက်အနေဖြင့် တစ်ရက်ကို ရေဘယ် လောက်သောက်သင့်တယ်ဆိုတာ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးလေ့လာနေပါတယ် ခင်ဗျ။
ဘာကြောင့် ရေသောက်ခြင်းက ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချဖို့အတွက် အကူညီဖြစ်နိုင်ခြေရှိရသလဲ
(Six reasons why drinking water may help you lose weight)
သုတသနပြုလုပ်သူများဟာ ဘာကြောင့် ရေပိုသောက်ခြင်းက လူတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချတဲ့ကိစ္စမှာ အကူအပံ့ဖြစ်ရသလဲ ဆိုတာ မသေချာမှုရှိနေဆဲပါ။ ဒါပေမဲ့ လေ့လာချက်များစွာအရ ရေသောက်သုံးမှုတိုးမြှင့်ခြင်းနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချခြင်းနှစ်ခုအကြား မှာတော့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဆက်နွယ်နေမှုအချို့ပြသလျက်ရှိပါတယ်။
အောက်မှာ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချခြင်းအတွက် ရေက အကူအညီဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် (၆)ချက်ကို ဝေငှရေးသားထားပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပါဦး။
(၁) ရေသည် သဘာဝအလျောက် အာသာပြေစေတဲ့ အရာတစ်ခု (Water isanatural appetite suppressant)
ရေသောက်ခြင်းဆိုတာ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချခြင်းအတွက် အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အစာအိမ်က ပြည့်ပြီလို့အာရုံခံစားမိတဲ့အခါ အစာစားခြင်းကိုရပ်တန့်ဖို့အတွက် ဦးနှောက်ကို အချက်ပြမှုများပို့လွှတ်ပါတယ်။ ရေအနေနဲ့ အစာအိမ်ထဲမှာ နေရာလပ်ယူလို့ရအောင် ကူညီနိုင်တာကြောင့် ဗိုက်ပြည့်တဲ့ ခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်လာပြီး ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းကို လျော့ချပါတယ်။
လူတစ်ယောက်က အမှန်တကယ်အားဖြင့် ရေဆာချိန်မှာ ဗိုက်ဆာနေတယ်လို့ တွေးထင်ကောင်းထင်နိုင်သေးတာပါ။ တစ်ခုခုစားသောက်ဖို့ မလုပ်ခင် ရေ တစ်ဖန်ခွက်လောက်သောက်လိုက်ခြင်းဖြင့် မလိုအပ်တဲ့ အဆာပြေအစာစားခြင်းကိစ္စကို ဟန့်တားဖို့ အကူအညီရပါတယ်။
၂၀၁၄ခုနှစ်လေ့လာမှုအရ ကိုယ်အလေးချိန်ပိုများနေသော အမျိုးသမီး အယောက် (၅၀)ကို နံနက်စာ၊နေ့လယ်စာနှင့် ညစာများမစားခင် မိနစ် ၃၀ အလိုမှာ ရေပမာဏ ၅၀၀ မီလီလီတာ (ml) ကို ရက်သတ္တပါတ် ၈ ပါတ်ကြာ ပုံမှန်သောက်သုံးစေခဲ့ပါတယ်။
အစမ်းသပ်ခံမှုမှာပါဝင်ပေးသူများရဲ့ အတွေ့အကြုံအရ ကိုယ်ခန္ဓာအဆီ ၊ ကိုယ်အလေးချိန်အတိုင်းအထွာ(body mass index) နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချခြင်းတွေမှာ အခြေအနေတစ်ခုထိရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ အစာစားချင်စိတ် အာသီသကိုလည်း သည်းခံမျိုသိပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံခဲ့ကြပါသေးတယ်။
ယမန်နှစ်က လေ့လောမှုစစ်တမ်းတစ်ခုမှာလည်း အလားတူရလဒ်အတိုင်း ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။
(၂) ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှုတိုးစေတယ် (Water increases calorie burning)
သုတေသနအချို့ ပြဆိုတာက ရေသောက်ခြင်းဖြင့် ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှုကို အကူအညီပေးနိုင်သည်ဆိုတာပါပဲ။
၂၀၁၄ခုနှစ် လေ့လာမှုတွင် လူ ၁၂ဦးကို ရေအေး ၅၀၀ မီလီလီတာ (ml) နဲ့ အခန်းတွင်းအပူချိန်အတိုင်းရှိတဲ့ ရေ တလှည့်စီ သောက်စေတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုတစ်ရပ်တိုးပွားလာကြောင်း တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။
ထုံးစံအတိုင်းနေတာထက် ရေသောက်ပြီး မိနစ် ၉၀အတွင်းမှာ ကယ်လိုရီပမာဏ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ သုံးရာခိုင်နှုန်းပိုမိုလောင်ကျွမ်းခဲ့တာပါ။
ရေက ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ အနားယူနေချိန် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု သို့မဟုတ် အနားယူနေချိန် ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှု အရေအတွက် ယာယီတိုးပွားခြင်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရေအေးသောက်ခြင်းက အခြားသော ရေရဲ့ကယ်လယ်ရီလောင်ကျွမ်းခြင်း အကျိုးကျေးဇူးများပိုမိုရရှိစေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆို တော့ အစာကြေစေခြင်းအတွက် ရေကို အပူဓာတ်မြင့်စေဖို့ ကိုယ်ခန္ဓာက စွမ်းအင် သို့မဟုတ် ကယ်လိုရီများကို သုံးစွဲရလို့ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) ကိုယ်ခန္ဓာမှ မလိုလားသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားဖို့ကူညီ (Water helps to remove waste from the body)
ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်နေသောအခါ ကိုယ်တွင်းမလိုအပ်သောအရာများကို ဆီး သို့မဟုတ် မစင်အဖြစ် မှန်ကန်စွာ မဖယ်ရှားနိုင်ပါဘူး။
ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများက မရှိမဖြစ်သော အဟာရဓာတ်များနှင့် လျှပ်လိုက်ပျော်ရည်(electrolytes)များ ထိန်းသိမ်းစဉ် ကျောက်ကပ်က အဆိပ်အတောက်နဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို စစ်ထုတ်ဖို့အတွက် ရေမှ ကူညီပေးပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်နေချိန် အညစ်အကြေးများကို ကျောက်ကပ်က အရည် (fluid) အဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။
ရေဓာတ်ကုန်ခမ်းခြင်းက အညစ်ကြေးစွန့်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကို မာတောင့်စေခြင်း၊ အညစ်အကြေးများ မာကျစ်သွားစေခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ၀မ်းချုပ်ခြင်းဖြစ်စေပါတယ်။ ရေဓာတ်က အစာဟောင်း အညစ်အကြေးများကို ပျော့ပြောင်းကာ ရှေ့ကိုရွေ့လျားစေသလို အညစ်အကြေးစွန့်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကိုလည်း လျောလျောရှူရှူ အလုပ်လုပ်စေတာပါ။
၀မ်းလျှောခြင်း နဲ့ အစာမကြေခြင်းကဲ့သို့သော အစာခြေအင်္ဂါဆိုင်ရာပြဿနာများမှ နလန်ထူဖို့ကိုလည်း ခန္ဓာကိုယ်အား ရေက အကူအညီပေးပါတယ်။
လူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းမှာ အညစ်အကြေးများစုပုံလာချိန်ဆို မောပန်းပြီး ဖူးယောင်ဖောင်းပွလာသလို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဖောယောင်တယ်ဆိုရာမှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခါးဆိုဒ်ကို လက်မတွေတိုးစေနိုင်တာပေါ့နော်။
ရေဓာတ်ပြည့်ဝအောင်နေထိုင်စားသောက်ခြင်းက မလိုလားအပ်သော ကိုယ်တွင်းအညစ်အကြေးများစုပုံကာ ကိုယ်အလေးချိန် အနည်းငယ်ပိုလာမှာကို ရှောင်ရှားနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
(၄) ရေသောက်ခြင်းက အရည်ဖြစ် ကယ်လိုရီဝင်ပေါက်အလုံးစုံကို လျော့ချနိုင်(Drinking water can reduce overall liquid calorie intake)
ရေဆိုတာက အားဖြည့်အချိုရည် ဒါမှမဟုတ် ဖျော်ရည်တွေလို ကယ်လိုရီမပါသော သောက်စရာတစ်ခုပါ။
ဆိုဒါရည်၊ ဖျော်ရည် သို့မဟုတ် အချိုကဲတဲ့ လဖက်ရည်/ကော်ဖီတွေလို ကယ်လိုရီမြင့် အရည်တွေသောက်ခြင်းဖြင့် ကယ်လိုရီ အလွယ်တကူစုပုံရရှိစေပါတယ်။
လူအများစုအနေဖြင့် အားကစားသမားတွေအတွက်ထုတ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့သောက်စရာ အချိုရည် ဒါမှမဟုတ် အယ်လ်ကိုဟော အရက်ပါသော သောက်စရာတွေ စားသောက်ခြင်းဖြင့် ကယ်လိုရီပမာဏဘယ်လောက်ဖြစ်နေပြီ ရနေပြီဆိုတာကို လျစ်လျူရှုထား ကြပါတယ်။
နေ့တစ်နေ့ခြင်းအတွက် ကယ်လိုရီမြင့်သောက်စရာအနည်းငယ်ရဲ့နေရာမှာ ရေ သို့မဟုတ် ဆေးဖက်ဝင်လက်ဖက်ရည် (Herbal tea)လို ကယ်လိုရီလုံးဝမပါဝင်သော သောက်စရာကို အစားထိုးခြင်းဖြင့် ရေရှည်ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချတဲ့ကိစ္စမှာ အကျိုးကျေးဇူးရှိနိုင်ပါတယ်။
၂၀၁၂ခုနှစ် ဆန်းစစ်ချက်ရေးသားသူများရဲ့တွေ့ရှိမှုမှာ ကယ်လိုရီမြင့်သောက်စရာ နှစ်မျိုး သို့မဟုတ် အတော်များများအစား ကယ်လိုရီ မပါသော သောက်စရာများကိုအစားထိုးပြီး အ၀လွန်အမျိုးသမီးအုပ်စုတစ်စုအား ခြောက်လလောက်နေ့စဉ်သောက်ခိုင်းကြည့်ရာတွင် ပျှမ်းမျှ ကိုယ်အလေးချိန် ၂ရာခိုင်းနှုန်းနဲ့ ၂.၅ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းလျော့ကျခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၅ခုနှစ်လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် ပါဝင်ပူးပေါင်းသူ အမျိုးသမီးများက ရက်သတ္တပါတ်၂၄ ပါတ်ဝိတ်ချခြင်းအစီအစဉ်တစ်ရပ်၌ တက်ရောက်နေစဉ် ရက်တစ်ရက်ကို နေ့လယ်စာစားပြီးနောက် ရေ ၂၅၀မီလီ (250 ml) သောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အလားတူအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်တက်ရောက်နေသလို နေ့လယ်စာစားပြီးချိန် ပမာဏတူဓာတ်စာဖျော်ရည်သောက်သုံးခဲ့ကြသည့် အခြားအမျိုးသမီးများထက် ကိုယ်အလေးချိန် ၁၃.၆ ရာခိုင်နှုန်းပိုကျခဲ့ပါတယ်။
နေ့စဉ် သကြားအချိုဓာတ်ကဲသောက်စရာနေရာမှာ ကယ်လိုရီနည်းသော သောက်စရာ သို့မဟုတ် ရေကိုအစားထိုးသောက်သုံးခဲ့သူ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးများရဲ့ ရလဒ်ရယ် အလားတူအုပ်စုထဲရှိ အပြောင်းအလဲမပြုလုပ်ခဲ့သောသူများရဲ့ ရလဒ်ရယ်ကို လေးနှစ်အကြာမှာ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရာ အတော်ကွာခြားသောရလဒ်အဖြေအတိုင်းအတာတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
အဆိုပါ လူအုပ်စုမှာပဲ အနည်းဆုံး သစ်သီးဖျော်ရည်တစ်ခွက်နေရာမှာ ရေသို့မဟုတ် ကယ်လိုရီနည်းသောသောက်စရာကို အစားထိုးသောက်သုံးခဲ့သူများ၌ သူတို့မျှော်မှန်းထားသော ပမာဏထက် 0.35 ကီလိုဂရမ် ပိုမိုလျော့ကျခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။
(၅) အဆီလောင်ကျွမ်းဖို့အတွက် ရေလိုအပ်ပါတယ် (Water is necessary to burn fat)
ကိုယ်ခန္ဓာအနေနဲ့ ရေမပါဘဲ အဆီသို့မဟုတ် ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ် သိုမှီးတဲ့ ကိုယ်တွင်းဇီဝဓာတ်ပြုနိုင်ဖို့ အဆင်မပြေပါဘူး။
အဆီအား ဇ်ီဝဓာတ်ပြုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို lipolysis လို့ခေါ်တယ်။ သည်ဖြစ်စဉ်ရဲ့ ပထမအဆင့်ကတော့ ရေမော်လီကျူးတွေနဲ့ အဆီ ဓာတ်ပေါင်းဖွဲ့ဖြစ်ကာ glycerol နဲ့ fatty acids ထုတ်ပေးတဲ့ hydrolysis ပါပဲ။
အစားအသောက်တွေကနေတစ်ဆင့် အဆီအဖြစ်ကောင်းကောင်းသိုလှောင်ထားတဲ့ အဆီကို လောင်ကျွမ်းသွားဖို့အတွက် မရှိမဖြစ် မလုပ်မဖြစ်ကတော့ လုံလောက်အောင်ရေသောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၆ခုနှစ်ရဲ့ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်လေးတစ်ခုအရ တိရစ္ဆာန်များတွင် ရေသောက်နှုန်းပိုမြှင့်စေလိုက်ခြင်းက lipolysis ဖြစ်စဉ်နဲ့ အဆီကျခြင်းဖြစ်စဉ်တစ်ရပ် တိုးပွားလာကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။
(၆) ကစားခုန်စားလေ့ကျင့်မှုတွေ ပြုလုပ်ရာမှာလည်း ရေက ကူညီ (Water helps with workouts)
ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချရေးအစီအစဉ်တိုင်းရဲ့ အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ကတော့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကြွက်သားများ၊ တစ်ရှူးအတွဲအဆက်များနဲ့ အရိုးအဆစ်များ မှန်ကန်စွာရွေ့လျားလှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ ရေက အကူအညီပေးပါတယ်။ အလားတူပါပဲ လေ့ကျင့်ခန်း လှုပ်ရှားကစားနေချိန် အဆုတ်၊ နှလုံးနဲ့ အခြားသော အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ ထိထိရောက်ရောက် အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ရေက အကူအပံ့ပေးပါတယ်။
ရေဓာတ်လုံလုံလောက်လောက်ရရှိနေခြင်းက ကြွက်တက်ခြင်းနဲ့ မောပန်းနွမ်းလျခြင်းတွေလို ပြဿနာတွေမများ လျော့ပါးစေပြီး လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နေတဲ့အပေါ် အဆင်ပြေပြေဖြစ်စေပါတယ်။
ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းမဖြစ်ရအောင် လေ့ကျင့်ခန်း မပြုလုပ်ခင်၊ ပြုလုပ်နေစဉ် ၊ ပြုလုပ်ပြီးနောက် အမြဲလိုလိုရေသောက်သင့်ပါတယ်။
မိမိလက်လှမ်းမီတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်မှာ သောက်ရေသန့်ကို ထားသင့်တာပါ။ အထူးသဖြင့် ရာသီဥတု ပူအိုက်ချိန်၊ စိုစွတ်ချိန် သို့မဟုတ် အလွန်အမင်း နေပူနေတဲ့အခြေအနေတွေမှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေရင်ပေါ့ဗျာ။
ရေပမာဏ ဘယ်လောက်သောက်သင့်သလဲ (How much water do you need to drink?)
အိမ်ထောင်ရှင်မတွေကတော့ မိသားစုထမင်းစားဖို့ပြင်ဆင်နေစဉ်မှာ ရေကရားထဲကနေ ဖန်ခွက်ထဲငှဲ့ထည့်ပေးကာ ကလေးတွေကို ပေးတတ်တာပါပဲ။
အကြုံပြုချက်ပေးရရင် အသက်အရွယ်နဲ့ ကျန်းမာရေးတို့လို အကြောင်းတရားတွေပေါ်မူတည်ပြီး ရေကိုချိန်ဆသောက်သုံးရပါမယ်။
ရေဘယ်လောက်သောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ စံသတ်မှတ်ချက် အကြုံပြုချက်မျိုးမရှိပါဘူး။ အချို့သောလူတွေက ရေပိုသောက်ဖို့ သို့မဟုတ် ရေလျော့သောက်ဖို့ အကြောင်းအရင်းအမျိုးမျိုးပေါ် မူတည်နေတာမို့ပါ။
(၁) လှုပ်ရှားသွားလာမှု အချိန်အဆ (activity level)
(၂) အသက်အရွယ် (age)
(၃) ကိုယ်ခန္ဓာအရွယ်အစား (body size)
(၄) အပူအအေးအတိုင်းအတာ (temperature)
(၅) စိုထိုင်းမှုအခြေအနေ (humidity)
(၆) နေထွက်မှုအခြေအနေ (sun exposure)
(၇) ကျန်းမာရေး အခြေအနေ (health status)
ကျန်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်သော အခွင့်အာဏာရှိသူများအနေနဲ့ နေ့စဉ်ရေသောက်သုံးရမယ့်ပမာဏတွေကို အကြံပြုလေ့ရှိပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်တောင်စု အမျိုးသားဆေးသိပ္ပံဌာန (National Academy of Medicine - NAM) အပြောအရ အရွယ်ရောက်သူ အမျိုးသမီးများအတွက် တစ်ရက်ကို ၂၇၀၀ မီလီလီတာ (2,700 mL/day for adult women) ၊ အရွယ်ရောက်ပြီးအမျိုးသားများအတွက် တစ်ရက်ကို ၃၇၀၀ မီလီလီတာ (3,700 mL/day for adult men) သောက်ရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။
ရေသောက်တာလုံလောက်ဖို့ (Getting enough water)
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ အမျိုးသားကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရဗေဒ စစ်ဆေးလေ့လာမှု (၂၀၀၅ - ၂၀၁၀) စစ်တမ်းအရ တွေ့ရှိတာကတော့ အရွယ်ရောက်အမျိုးသားအများစုဟာ NAM က အကြံပြုညွှန်းဆိုထားတဲ့ တစ်ရက်တာရေသောက်နှုန်းထက် ပိုမိုသောက်သုံးခဲ့ကြတာပါပဲ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ရလဒ်ကပြဆိုတာကတော့ အရွယ်ရောက်သူအများစု အထူးသဖြင့် အသက်အရွယ်ရနေပြီးသော လူကြီးတွေဟာ NAM က လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းပြည့်မှီဖို့ ရေကိုလုံလောက်အောင်မသောက်ခဲ့ကြပါဘူးတဲ့။
အသက်အရွယ် ၂၀ - ၅၀ အုပ်စုအတွင်းရှိ အမျိုးသား ၄၂.၇ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ အမျိုးသမီး ၄၀.၆ ရာခိုင်နှုန်းဟာ NAM ရဲ့အကြံပြုထားချက် အတိုင်း မပြည့်မှီ မသောက်သုံးခဲ့ကြပါ။ အသက်အရွယ် ၇၁နှစ် သို့မဟုတ် သည်ထက်အသက်ပိုရနေသော အမျိုးသား ၉၄.၇ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ အမျိုးသမီး ၈၂.၆ ရာခိုင်နှုန်းဟာလည်း လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း ရေမသောက်ကြပါဘူး။
ရေသောက်မိဖို့ လိုက်နာရမယ့် ယေဘုယျအချက်များ -
ရေ ၈အောင်စ တစ်ဖန်ခွက်ကို အစာစားချိန်တိုင်းသောက်ပေးပါ။
ပြန်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ ပုလင်းတစ်လုံးထဲသို့ ရေထည့်ကာ သွားလေရာသယ်သွားပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ချိန် သို့မဟုတ် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ရေပိုသောက်ပါ။
ရာသီဥတု ပူနွေးချိန်၊ စိုစွတ်ချိန် သို့မဟုတ် နေအလွန်ပူတဲ့အချိန်များမှာ ရေပိုသောက်ပေးပါ။
အိပ်ရာနံဘေးမှာ ရေတစ်ဖန်ခွက်လောက်တော့ ထားထားပါ။
သစ်သီးဖျော်ရည်၊ ရေလုံပြုတ်ဟင်းလျာတွေလို စွပ်ပြုတ်နဲ့ အရည်များသော အစားအစာများကို စားသောက်ပေးပါ။
ဘယ်ရီသီးများ၊ စပျစ်သီး၊ ဖရဲသီးများ၊ ခရမ်းချဉ်သီးများ၊ သခွားသီးများ၊ မုန်ညင်းရွက်၊ ဆလပ်ရွက်တို့လို ရေဓာတ်ပါဝင်နှုန်းများသော သစ်သီးများနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စားသုံးပေးပါ။
Alex Aung (23 January 2019)
Ref: “Can water help you lose weight?”By Jennifer Huizen
Posted by Alex Aung at 5:16 AM